Roche सीमा को बारे मा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
हाम्रो उपग्रह, चंद्र, पृथ्वीबाट औसत 384.400 3,4०० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। प्रत्येक वर्ष यो XNUMX सेन्टीमिटर टाढा सर्छ। यसको मतलव लाखौं बर्ष पछि चन्द्रमा हाम्रो उपग्रह हुन रोक्न सक्छ। यदि दृश्य विपरित थियो भने के हुन्छ? त्यो हो, यदि चन्द्रमा हाम्रो ग्रहको लागि अलि नजिक आयो प्रत्येक बर्ष। यो तथ्यलाई रोचे सीमा। यो रोचेको सीमा के हो?
यस लेखमा हामी यसको बारेमा सबै कुरा व्याख्या गर्दछौं।
1 यदि चन्द्रमा हाम्रो ग्रहको नजिक आए
2 रोचे सीमामा गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव
3 रोचेको सीमा र मानव
यदि चन्द्रमा हाम्रो ग्रहको नजिक आए
सर्वप्रथम, यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि यो पूर्णतया काल्पनिक हो। चन्द्रमासँग हाम्रो ग्रहको नजीक जान कुनै बाटो छैन, त्यसैले यो सबै अनुमान छ। वास्तवमा, वास्तविकतामा, चन्द्रमा हरेक वर्ष पृथ्वीबाट अगाडि बढ्दै जान्छ। हामी त्यस समयमा फर्कौं जब हाम्रो ग्रह अझै नयाँ बनेको थियो र हाम्रो स्याटेलाइटमा कक्षा हालको भन्दा निकट थियो। यस समयमा ग्रह र उपग्रह बीच दूरी थोरै थियो। थप रूपमा, पृथ्वी एक द्रुत तरीकाले आफैंमा घुमायो। दिन केवल छ घण्टा लामो थियो, र चन्द्रमा आफ्नो कक्षा पूरा गर्न केवल १ days दिन लाग्यो।
हाम्रो ग्रहले चन्द्रमामा लगाएको गुरुत्वाकर्षण यसको घुमाउनलाई सुस्त बनाउन जिम्मेवार छ। उही समयमा, हाम्रो ग्रहमा चन्द्रमाले चलाएको गुरुत्वाकर्षण भनेको परिक्रमणलाई सुस्त बनाउँदैछ। यस कारणले गर्दा, आज पृथ्वीमा दिनहरू २ 24 घण्टा लामो छन्। प्रणालीको कोणीय गतिमा रहँदा, यो चन्द्रमा हो जुन क्षतिपूर्ति दिन हामीबाट टाढा रहेको छ।
कुञ्जी गतिको संरक्षण दुवै दिशामा कायम राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि चन्द्रमा कक्षा को लागी एक दिन भन्दा बढी लिन, प्रभाव हामी यहाँ देख्न को रूप मा उस्तै हुनेछ। त्यो हो, ग्रहको परिक्रमण सुस्त हुन्छ र उपग्रह यसको लागि क्षतिपूर्ति गर्न सारिन्छ। जहाँसम्म, यदि चन्द्रमा आफैंमा छिटो घुमायो भने यसले विपरीत परिणाम उत्पन्न गर्दछ: ग्रहको परिक्रमणको गति बढ्नेछ, दिनहरू थोरै समयमा चल्नेछन् र उपग्रह क्षतिपूर्तिको लागि झनै नजीक हुनेछ।
रोचे सीमामा गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव
यो बुझ्नको लागि, हामीले यो जान्नु आवश्यक छ कि यदि हामी यति नजिक आउँछौं भने गुरुत्वाकर्षण बल अझ जटिल हुन्छ। त्यहाँ एक बिन्दु छ जहाँ सबै गुरुत्वाकर्षण बातचीत मिल्दछ। यो सीमा रोचे सीमा भनेर चिनिन्छ। यो एक वस्तुको प्रभाव बारे हो जब यो आफ्नै गुरुत्वाकर्षण द्वारा समर्थित छ। यस अवस्थामा हामी चन्द्रमाको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यदि चन्द्रमा अर्को वस्तुको नजिक जान्छ कि गुरुत्वाकर्षण यसलाई विकृत गर्न र नष्ट गर्न सक्दछ। यो रोचि सीमा ताराहरूमा पनि लागू हुन्छ, क्षुद्रग्रह, ग्रहहरू र उपग्रहहरू।
सहि दूरी दुबै वस्तुहरूको द्रव्यमान, आकार र घनत्वमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणको लागि, पृथ्वी र चन्द्रमा बीच रोचे सीमा 9.500, .०० किलोमिटर हो। ठोसबाट साधारण चाँदीको उपचार गरेर यसलाई ध्यानमा राखिन्छ। यो सीमाको अर्थ यो हो कि, यदि हाम्रो उपग्रह 9500 XNUMX ०० किलोमिटर वा कम दूरीमा रहेको थियो भने, हाम्रो ग्रहको गुरुत्वाकर्षण आफ्नैमा लिनेछ। यसको परिणाम स्वरूप, चन्द्रमा पूर्ण रूपमा चकनाचूर हुँदै, सामग्रीको टुक्राको औंठीमा परिणत हुने थियो। सतहमा गुरुत्वाकर्षण को प्रभाव को कारण तिनीहरू पतन समाप्त नभएसम्म यी सामग्रीहरू पृथ्वी वरिपरि घुम्न जारी रहनेछ। सामग्रीका यी टुक्राहरूलाई उल्का पिण्डहरू भन्न सकिन्छ।
यदि एउटा धूमकेतु पृथ्वीबाट १ 18000,००० किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा रहेको भए यो गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले समाप्त हुन्छ र चकनाचूर हुन्छ। सूर्य उही प्रभाव गर्न सक्षम छ तर अधिक दूरीको साथ। यो हाम्रो ग्रहको तुलनामा सूर्यको आकारका कारण हो। कुनै वस्तुको आकार जति ठूलो हुन्छ, गुरुत्वाकर्षणको शक्ति त्यति नै ठूलो हुन्छ। यो केवल एक सिद्धान्त मात्र होईन, तर तिनीहरूका ग्रहहरूद्वारा उपग्रहहरूको विनाश पनि यही हो जुन मा हुनेवाला छ सौर्य प्रणाली। यसको सब भन्दा राम्रो ज्ञात उदाहरण फोबोस हो जुन उपग्रह हो जुन वरपर घुम्न जान्छ ग्रह मंगल र यो यो ग्रह मा आफु भन्दा छिटो गति संग त्यसो गर्दछ।
रोचे सीमा भित्र, यो सानो वस्तुको गुरुत्वाकर्षण हो जुन आफ्नो संरचना सँगै राख्न सक्दैन। तसर्थ, वस्तु ग्रहको गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अधिक प्रभावित रोशको मुख्यालयको सीमामा पुग्दा। जब यो सीमा अहिलेदेखि करोडौं वर्ष पार गर्छ, उपग्रहले टुक्राहरूको ब of्गाइमा परिणत गर्दछ जुन मंगल ग्रहलाई परिक्रमा गर्नेछ। एक पटक सबै टुक्रा एक पटक कक्षाको लागि मा हुन्छन्, तिनीहरू ग्रह को सतह मा वर्षा गर्न शुरू हुनेछ।
वस्तुको अर्को उदाहरण जुन रोचे सीमाको नजीक हुन सक्छ, यद्यपि यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छैन, यो ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ट्राइटन हो। नेप्च्यून। कम वा कम, यो अनुमान गरिन्छ कि 3600..XNUMX अरब वर्षमा दुईवटा चीजहरू हुन सक्छन् जब यो सेटेलाइट रोचेको सीमा नजिक पुग्छ: यो ग्रहको वायुमण्डलमा पर्न सक्छ जहाँ यसको विभाजन हुनेछ वा यो ग्रहमा भएको औंठी जस्तै समान सामग्रीको अंशहरूको सेट हुनेछ स्याटर्न.
रोचेको सीमा र मानव
हामीलाई यो प्रश्न सोध्न सकिन्छ: किन ग्रहले हामीलाई गुरुत्वाकर्षणको सीमा भित्र छ भनेर विचार गरी यसको गुरुत्वले नष्ट गर्दैन? यद्यपि यो सम्भव छ कि यो तार्किक हुन सक्छ, योसँग एकदम सरल उत्तर छ। गुरुत्वाकर्षणले ग्रहको सतहमा सबै जीवित वस्तुहरूको शरीर राख्छ।
शरीरलाई समग्र समात्ने रासायनिक बन्धनको तुलनामा यो प्रभाव सायद अर्थपूर्ण हुन्छ। उदाहरण को लागी, हाम्रो शरीर मा रासायनिक बॉन्ड द्वारा बनाईएको यो शक्ति गुरुत्वाकर्षण को बल भन्दा धेरै शक्तिशाली छ। वास्तवमा, गुरुत्वाकर्षण ब्रह्माण्डमा सबै शक्तिहरु भित्र एक धेरै कमजोर शक्तिहरु हो। एउटा विन्दु जहाँ गुरुत्वाकर्षणले तीव्रताले कार्य गर्दछ आवश्यक हुन्छ, जस्तैaमा कालो प्वाल यदि Roche सीमित गर्न को लागी सक्षम गर्न हाम्रो शरीर सँगै पकड बलहरु लाई पार गर्न।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं रोचे सीमाको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » रोचे सीमा